FAKAFAKA: Aza mba donto ihany! | NewsMada
Aleo hazava ny resaka fa tsy ilay adikan’ny sasany hoe: “dondrona” akory ny hevitry ny donto fa manakaiky amin’ny hoe: “tsy mahare na inona na inona intsony noho ny zavatra na tranga nihatra taminy”. Rehefa ny zaza no maty vono sy voakapo-dava, manjary donto ka tsy handray anatra intsony. Raha ny lehibe no donton’ny eboebo, tsy mahatsapa esoeso. Ohatra ihany izany fa maro be ireo mety hitarika ny olona ho donto.
Tafalatsaka ao anatin’izany fahadontoana izany ihany koa ny zavakanto sy ny kolontsaina malagasy. Tsy andairana torohevitra intsony ny sehatra sasany, hany ka manohy hatrany ny lalan-diso alehany. Ambara fa ampy sy sahaza ny Malagasy ny fiteny malagasy, ny an-dry zareo efa donton’ny fiteny vahiny tsy mety raha tsy laroina izany rehefa miresaka. Aza mba donto ihany! Efa fantatra ao anatin’ny fahendrena malagasy fa “aza ny lohasaha mangina no jerena fa Zanahary an-tampon’ny loha”. Ny an-dry donto isany manjary “angalaro fa tsy misy mahita”.
Tsy mba azon’io fahadontoana io ny Malagasy fahiny, noho izy nahay nampifandrindra tsara ny fiainany tamina lamina voajanahary. Tsy nogejain-javatra “hafahafa” tahaka ny eboebo, voninahitra, sns, izy ireo, hany ka tsy nety donto fa nanana faharanitan-tsaina lehibe sy fahatsapan-tena goavana.
Manana ny maha izy azy ny Malagasy fahiny. Saingy, niova tsikelikely ny sasany tamin’izany rehefa nanomboka niha“donto” izy. Tsy nandaitra taminy intsony ny fahandren-drazana rehefa donton’ny “fandrosoana” ny ampahana Malagasy. Tsy henon’ny sofiny intsony ny “firaisankina no hery” ka nosoloiny “samy maka ho azy”. Tsy takatry ny sainy intsony fa “manody ny zava-drehetra”, sns.
Mety mitombo isa andro aman’alina ireo Malagasy tafiditra ho anisan’ny donto (tsy mahare na inona na inona), raha tsy miverina manokatra ny masom-panahiny (fahendrena malagasy: Ny fanahy no maha olona) ny tsirairay!